Amakhadi ane-Emojis ▷➡️ eltecnoanalista
Amakhadi anama-Emojis. Uma ufuna ukudlulisa a imizwa kumlayezo nge-smartphone noma ezingxoxweni ezingokoqobo ezinkundleni zokuxhumana, kungenzeka ukuthi usuyisebenzisile inhliziyo yakho, isandla esiphakamisa izithupha, izintende, noma ubuso obuphuzi obujabulisayo. Usesho lwakamuva lwe-Google luthole ukuthi igama elithayiphiwe kakhulu le-SMS noma ingxoxo bekungelona igama, kodwa idizayini yenhliziyo ebomvu. Ngokusho kwenkampani, isithombe nokuguqulwa kwaso kuvela izikhathi eziyizigidigidi ngosuku emhlabeni jikelele. Ukudla, izilwane, ezokuthutha, abantu, imizwa. Zonke lezi zithombe ezimibalabala ezivela njengenye indlela kukhibhodi yakho zibizwa I-Emojis.
Izinhlamvu ezine-Emojis ➡️
Ukuxhumana akukhona nje ngamagama akhulunywayo noma abhalwe kahle, ngoba sibuye sixhumane ngaphandle kokukhuluma, okungukuthi, ngaphandle kokusebenzisa ulimi. Ngokunembayo, ngesimo sobuso bethu, ukuthinta kwethu, umzimba wethu kanye nephimbo. Ukuxhumana kwethu kuya ngokuya kudijithali. Sibhala ama-imeyili futhi sixoxe WhatsApp, Fb, Instagram noma Snapchat. Esingakwazi ukukuveza empilweni yangempela ngamagama, noma ngokungakhulumi, kushintshaniswa ama-Emoji nemibhalo emifushane. Lokhu kwengeza imizwa embhalweni futhi kungagwema ukungaqondi kahle. Abantu abaningi bathi bangakwazi veza imizwa kangcono nge-Emojis kunamagama.
Ngokungeziwe ezenzweni zobuso ezihlukahlukene kanye nokuthinta komzimba, kukhona nama-Emoji amele izinto. Lokhu ngokuvamile kusiza omunye ukuba aqonde isimo kanye nomongo waso. Ukuziphendukela kwemvelo kwe Amakhadi anama-Emojis Lethe izinzuzo eziningi kumabhrendi kanye nezinkundla zokuxhumana. Enye yezinkulu izinzuzo zokusebenzisa Izithonjana kanye ne-Emoji ukufinyeza umlayezo, okungukuthi, ukwenza okuqukethwe yi-a umbhalo uyashesha futhi uqonde kakhudlwana.
Singasho ukuthi cishe akunakwenzeka ukuthumela futhi ungayifaki i-Emoji, akunjalo? Uma ungomunye walabo abathandayo Amakhadi anama-Emojis, kodwa awazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani ngobuchule, sizokusiza! Ibonisa ukuthi lezi izethulo eziyingcaca zihlume kanjani nokuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuzisebenzisa ezincwadini zakho.
Izinhlamvu ezine-Emojis Ziyini?
Igama "I-Emoji » iphuma enhlanganweni ye-«e» (絵), okusho isithombe ngesi-Japanese, kanye ne-"moji" (文字), okusho ukuthi uhlamvu. Okusho ukuthi, ziyizimpawu ezimele umqondo, igama noma umusho ophelele.
Lezi zimpawu zinokubukeka kwezinkulumo, izinto, izilwane, izinhlobo zesimo sezulu, njll. Baphenduke umkhuba ngokusetshenziswa okwandayo kwama-smartphones.
Namuhla ziyingxenye yokubhala futhi zibhekwa njengolimi olusha. Isibonelo, igama lonyaka ka-2015, elikhethwe yisichazamazwi se-Oxford, lalithi!
Kodwa ukunakekelwa! Ungaphambanisi Amakhadi anama-Emojis con Izithombe-mzwelo / Izithonjana. Nakuba ama-Emoji eyizinhlamvu ezizimele, izithonjana ziyizithombe-mzwelo noma izimpawu ezenziwe ngezinhlamvu zekhibhodi, ezifana nokuthi (-: noma <3.
Umlando "Wamakhadi ane-Emojis"
I-Los Amakhadi anama-Emojis Sebevele beyingxenye yesiko lethu futhi nsuku zonke kunzima ukukhumbula ukuthi beza nini futhi kuphi, akunjalo?
Kepha indaba yindala kakhulu kunalokho ebonakala futhi iqala ngo-XNUMX, eJapan, njengoba imvelaphi yegama elithi "Emoji" isivele isho njalo.
Konke kwaqala ngesikhathi inkampani yomakhalekhukhwini i-NTT DoCoMo ithuthukisa i-I-mode, uhlobo lwenqwaba yolwazi lwamaselula, okuhlanganisa i-imeyili, isimo sezulu, izindaba kanye nokufinyelela ku-inthanethi, eyayithuthuke kakhulu ngaleso sikhathi futhi ifuna ukuguqula indlela amaJapane axhumana.
U-Shigetaka Kurita, omunye wabasebenzi be-NTT DoCoMo ababambe iqhaza kuphrojekthi ye-I-mode, wabona ukuthi ukuxhumana kwakubanda futhi ngezinye izikhathi okunzima kangakanani ngokukhawulela imisho ebhalwe ngocingo kuphela kumakhalekhukhwini, futhi waqala ukucinga indlela yokwenza imilayezo ibe ngumuntu.
Kodwa akekho kubo owanelisekile futhi yilapho u-Kurita, owayengeyena umklami, ehlanganisa iqembu elincane futhi, ngomkhawulo wamaphikseli angu-12 × 12, wasungula ama-Emojis angu-176 okuqala anomlando.
Ngokusho kuka-Kurita, ugqozi lwakhe lwalezi zimpawu zakuqala luvela emasikweni aseJapane nezinkulumo azibona ku-anime ne-manga lapho esemncane.
Lapho umbhali we-Emojis ekugcineni ethula imiklamo yasekuqaleni ezinkampanini ezinkulu zobuchwepheshe, wayethemba ukuthi zizoyithuthukisa ngesakhiwo sazo, kodwa lokho akwenzekanga: izimpawu zingene kwimodi mina ngokuqondile ngendlela ezaziklanywe ngayo ekuqaleni.
Kungekudala ngemuva kokukhishwa kwe-Emojis emphakathini uwonke, ezinye izinkampani zezokuxhumana zaqala ukukopisha ngokungenamahloni imiklamo nombono wabalingiswa, zengeza izinto ezintsha, njengoba inkampani i-NTT DoCoMo kanye noKurita bengazange bagunyaze ukusungulwa.
Lokhu kugcine sekukhiqize izinhlamvu eziningi ezahlukene kanye nesiyaluyalu sangempela: inani lama-Emojis lifinyelele emakhulwini ayisishiyagalombili! - okwaqala ukuxazululwa ngo-XNUMX, lapho zonke izinkampani zanquma ukubeka imephu ukuthi yiziphi izinhlamvu ezisetshenzisiwe futhi zizame ukusungula izinga phakathi kwabo.
Kulungile, kodwa avele kanjani "Amakhadi E-Emoji" e-Japan futhi athatha iplanethi?
Uma ubucabanga nge-Apple, uqinisile!
Ngo 2007, I-Apple ikhiphe i-iPhone yokuqala futhi, ngokucabangela ukuthandwa kwayo emakethe yaseJapane, kufakwe ama-Emoji, njengoba lezi kwakuyizinkambiso ezinamandla kakhulu ezweni.
Kodwa lapha entshonalanga, ama-Emojis ayesafihliwe ku-iPhone futhi atholakala kuphela lapho abasebenzisi beshintsha ulimi lwedivayisi lube lwesiJapane.
Ngokunikezwa isifiso somphakathi obufuna ukuxhumana usebenzisa izimpawu nobuso obuthambile, U-Apple ukhiphe i-Emojis yazo zonke izilimi ngo-2011, ngokwethulwa kwe-iOS.
Futhi lokho kwaba isiqalo somkhuhlane njengoba sikwazi namuhla: I-Google ne-Windows zenze isiqiniseko sokuthi ama-Emojis awo agqugquzelwa idizayini yomncintiswano.
Ukuze kugwenywe isiphithiphithi esasiyisiqalo se-Emojis e-Japan, i-Unicode Consortium yathatha inkathazo yokwenza ikhodi yezinhlamvu ifane ukuze abasebenzisi bezinhlelo zokusebenza ezihlukene bakwazi ukusebenzisa i-Emojis ngaphandle kokungaboni ngaso linye.
Namuhla, i Amakhadi anama-Emojis ziyingxenye yesiko, futhi zisetshenziswa kusukela ekuxhumaneni kwansuku zonke kuye ekuxoxeni izindaba, njengasendabeni yencwadi ye-Emoji Dick, eguqule indaba yakudala ye-Moby Dick isebenzisa ama-Emojis kuphela.
Amakhadi anama-Emojis Kwezentengiso
Ngokuthandwa okukhulu kwe Amakhadi anama-Emojis kanye nendlela ezifakwe ngayo esikweni leplanethi, abathengisi abahle babone amathuba angenakubalwa lolu limi olungawanikeza ukuxhumana namakhasimende abo.
Naphezu kokuba umkhuba oqinile ngempela, kuyadingeka ukuba uqaphele ekusetshenzisweni kwawo, ungenzi ihaba noma ubangele ukungezwani. Ngakho silethe okunye amathiphu wokuthi usebenzise i-emojis ekukhangiseni yenkampani yakho:
Lesi isinyathelo esibalulekile ngaphambi kokucabanga nganoma yikuphi ukuxhumana, njengoba sihlala sikhuluma lapha kuwebhu yewebhu.
Ngaphambi kokuthi ucabange ukuthi yini ongayisho nokuthi ungayisho kanjani, thola ukuthi ngabe umuntu wakho uyathinteka yini ukusetshenziswa kwe-Emojis. Ingabe kungenxa yokuthi izilaleli zakho zisemaphesentini ayisishiyagalombili namanje ezingakasebenzisi futhi ezingakazifani nabalingiswa?
Kulo msebenzi wokucwaninga nokuhlola. Bona ukuthi yiluphi uhlobo lokuxhumana olusabela kakhulu kokuthunyelwe kwakho nokuthi kungena kanjani.
Enye yokwehluleka okukhulu uku sebenzisa i-Emoji kwezokuthengisa kuwukuzisebenzisa ngaphandle kokwazi incazelo ngempela. Akuwona wonke umuntu ongamela lokho okucabangayo, ngakho-ke kubalulekile ukwazi kahle ukuthi ukhuluma ngani.
Ithiphu elihle ukusebenzisa i-Emojipedia ukuthola incazelo ye-Emojis ngayinyengaphandle kokucwaninga abalingiswa abakhethiwe ezinkundleni zokuxhumana ukubona ukuthi abantu bazisebenzisa kanjani futhi bakusiphi isimo.
Kungenzeka ukuthi uye wakwazisa, kodwa Amakhadi anama-Emojis zivuselelwa njalo.
Futhi khumbula ukuthi umuntu wakho ubelokhu esebenzisa ini, yini ethrendayo nokuthi yini engasasetshenziswa, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi ukuxhumana kwakho kushunwe ngolimi lokuthi ufuna ukufinyelela bani.
Njengoba sibonile lapho ezinsukwini zakuqala I-Emojis, ukudalwa kwayo bekuwukudlulisa imizwelo ngokuqondile obekungenzeki embhalweni nokwenza imilayezo ibanda futhi iqhelelene.
Ngakho-ke, kuyindlela enhle yokusebenzisa Amakhadi anama-Emojis en hlanganyela ngesikhathi sangempela futhi uhlanganyele nezithameli zakho, ikakhulukazi uma lokho kuxhumana kungahlelekile futhi kumnandi, njengalapho othile encoma inkampani yakho noma okuqukethwe kwebhulogi yakho yewebhu noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
5. Gwema imilayezo ebethelwe noma uyichaze kahle
Akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuqonda kalula ukuthi izimpawu zisho ukuthini, ngakho-ke qaphela imilayezo efakwe ikhodi ngokugcwele ngama-Emoji. Umlayezo wakho ungase ungangeni futhi ungase uphuthelwe ukwakha ukuxhumana nezithameli zakho.
6. Yazi ukuthi kufanele uqashe nini
I-Emoji esetshenziswe esimweni esibucayi ngempela, njengalapho iphendula umbhikisho ovela kumsebenzisi wayo ku-Twitter noma esitatimendeni esibucayi kakhulu, ingadutshulwa onyaweni.
Qiniseka ukuthi i-Emoji ngeke idide noma imcasule umuntu ofunda umlayezo wakho, futhi uyisebenzise ngokucophelela, ikakhulukazi kusevisi yamakhasimende.
7. Sebenzisa Amakhadi Anama-Emoji ahambisana nomlayezo wakho
Ungalokothi usebenzise Amakhadi anama-Emojis ukusebenzisa nje. Qiniseka ukuthi umsebenzi uzokwengeza emyalezweni wakho noma uhlobane nalokho ofuna ukukusho.
I-Emoji Ehlekayo Ekhalayo isetshenziselwa ukuzwakalisa ukuthi uhleke kakhulu kangangokuthi amehlo akho agcwala izinyembezi. Isetshenziselwa ukuxhumana lapho umuntu ethola okuthile okujabulisa ngempela. Le Emoji yaziwa kakhulu kangangoba bekungeyokuqala ukwengezwa kusichazamazwi sesiNgisi i-Oxford kwathi ngo-XNUMX yathathwa “njengeZwi Lonyaka”.
Ubuso obucabangayo i-Emoji esetshenziselwa ukusho ukuthi ucabanga ngokuthile, noma ukuveza ukuthi udidekile. Ingasetshenziswa futhi uma ufuna ukungabaza iqiniso lento eshiwo. Njengelukuluku singasho ukuthi ingesinye sezithonjana ezimbalwa ezikhombisa isandla.
Le Emoji ivame ukusetshenziselwa ukuveza ukukhululeka lapho uphuma esimweni esinzima. Kungasetshenziswa futhi ukusho ukuthi ube namahloni kancane ngesimo esithile.
Lobu buso obumamathekayo obunezihlathi ezikhazimulayo bungamelela ukumamatheka okunamahloni. Lingamelela futhi ukwaneliseka, ukuthula kwengqondo nokubonga. Ukuguqulwa kwayo kwemzwelo ithi ^^.
Kodwa ubuso bengelosi bungasetshenziswa futhi ngendlela exakayo, ezenzweni noma ekuziphatheni okungekuhle kakhulu.
Ungangithathi serious! Le Emoji isetshenziselwa ukukhombisa umlayezo oyindida, oyindida noma ojabulisayo. Ngaphezu kwalokhu, kungasho ukuthi uthola into eyisicefe noma ungathandi ihlaya.
Lobu buso obunonya obucwayizayo bungabonakalisa isenzo sokusebenzisana noma imvume, futhi busetshenziswa njengophawu lokudlala ngothando. Ngokunjalo, lingasetshenziswa ukuveza igama elithi "ok" elinikezwe umuntu, ihlaya noma indida njengoba kungaba njalo.
Lobu buso bokukhululeka ngakho konke kwahamba kahle! Lisetshenziswa lapho umuntu ejabule ngokuthi into engathandeki iphelile. Kungasho futhi ukuthi lowo muntu ukhululekile, akanakho ukukhathazeka.
Ibonisa uthando, ukwazisa, nokubonga, futhi ngokuvamile isetshenziswa emilayezweni yothando.
Lena enye ye-Emojis yokuqabula esetshenziswa kakhulu, ebonisa uthando, ukubonga noma inhloso ethile yothando. Ingasetshenziswa futhi ekugcineni komusho obhuqayo noma njengendlela yokusabela esigijimini esingenanhlonipho.
Le Emoji idume kakhulu, ngokuvamile isetshenziselwa ukuthumela ukwanga okunothando komunye umuntu. Kunama-Emoji ahlukene okuqabula, kodwa lena ingenye esetshenziswa kakhulu.
Le Emoji ingasetshenziswa kolunye uhlobo lokuthi "Ngiyadlala", ukuze kuthambise amazwana ahlekisayo noma ukwenza kucace ukuthi okuthile kushiwo okungafanele kuthathwe njengeqiniso.
Ingane enezibuko zelanga
Uma ufuna ukukhombisa ubuhlakani, lena i-Emoji efanelekile. Ingase futhi isetshenziselwe ukukhombisa indida nokunganaki kokuthile okukhulunyiwe. Ngaphezu kwalokho, lifanekisela ilanga, amaholide kanye nehlobo ogwini.
Lokho kumomotheka okuyingxenye kumelela ukubhuqa, ukubanda noma kusetshenziselwa ukusho ukuthi othile wenza okuthile. Ingase futhi isetshenziselwe ukudlala ngothando noma ukwenza amazwibela ocansi.
Lokhu kubukeka okukhathazayo kuveza ukungeneliseki. Kukhombisa ukuthi lo muntu akanantshisekelo ngento ethile, ukuthi akanaso isithakazelo noma akavumeli.
Isetshenziswa lapho othile ezizwa ekhathazekile, engavikelekile futhi futhi engakhululekile. Kubonisa ukuthi umuntu ukhathazekile ngesimo esiyinkimbinkimbi noma isenzakalo esibalulekile.
Le Emoji Yeshiya Elikhalayo Nokukhala ibonisa isimo sobuhlungu bento ethile, yokuhlupheka. Ukuthi kusebuhlungu ukukhumbula okuthile. Ivamise ukusetshenziselwa ukuveza ukungakhululeki noma ukudumala ngokuthile.
Le Emoji isetshenziswa uma ucasukile, uthukuthele noma ucasukile ngokuthile. I-Emoji Yobuso Obuthukuthele iveza isimo esibi noma ukungakhululeki esimweni.
Isetshenziswa lapho umuntu ethukile, esimweni esingakhululekile noma enze iphutha. Veza ukuphoxeka, ukuthi udlula kokuthile okubangela amahloni kakhulu, noma ukusabela ekuncomeni noma umlayezo othophayo.
Lobu buso obuthukile bukhuthazwe umdwebo othi The Scream weciko laseNorway u-Edvard Munch. Kusho ukuthi umuntu uyesaba, kukhona akusatshwayo.
Lobu buso bumele umuntu wethukile futhi odidekile. Kubukeka kuthuswe ngokujulile futhi kumangazwe isigameko esithile esibi noma umuzwa ojulile.
Imele ingcindezi noma ukukhathazeka, lapho izinto zenzeka ngendlela ehlukile kunokulindelekile. Ingasetshenziswa futhi uma ukhathele noma unokuningi okwenzayo. Lokhu kumelela injabulo ngokukhululeka.
Le Emoji isetshenziselwa ukumela ukuthi umuntu akakwazi ukukhuluma. Ukuthi othile akafuni noma akakwazi ukusho lutho ngesihloko esithile. Isetshenziswa ezingxoxweni ezinzima, ezinamahloni noma ezimbi.
Le Emoji imelela ukuthi okuthile bekuyihlazo ngempela. Kuwukubonakaliswa kovalo noma ukuphoxeka. Kungasetshenziswa futhi njengokumomotheka okunecala kancane, okuvela kothile owenze into ewubuwula futhi ozama ukuxazulula isimo esishubile ngokwenza ubuso.
Emakhomikhi noma emakhathuni, i-zZz ngaphezu kwekhanda isho ukuthi umlingisi ulele. Le Emoji isetshenziswa lapho umuntu ekhathele kakhulu, efuna ukulala noma enesizungu ngendaba.
Le Emoji ibonisa umuntu oshonile ngenxa yokukhathala. Leli gwebu eliphuma ekhaleni liwuphawu lwe-manga, olumelela ukuthi umlingiswa ulele.
Isetshenziswa njengesisho sokuthi inkulumo igaya izibozi futhi iyozela.
Le Emoji isho ukuthi lo muntu wayecasulwe yilokho okushiwo kangangokuthi wayengase ahlanze. Isetshenziswa njengendlela yokungavumeli okuthile.
Lokhu kumomotheka okunonya okunezimpondo zikadeveli ezincane kuhloselwe ukukhombisa ukuthi umuntu ufuna ukudala inkinga. Ingasetshenziswa futhi ngonya noma ngokocansi.
Haleluya! Lezi zandla ezeluliwe zisetshenziselwa ukugubha okuthile noma ukuveza ukuthi umuntu ujabule ngoba into abeyilindele ekugcineni yenzekile. Uphinde athi uyazijabulisa futhi uyasithokozela lesi sikhathi.
Hawu, kuhle ngempela! Le Emoji ibonisa izandla ezimbili ezishaya izandla futhi isetshenziselwa kakhulu ukubonisa imvume nokubonga. Ingasetshenziswa futhi ngokubhuqa, uma kukhona okungakufanelanga ukushayelwa ihlombe!
Lesi sibhakela sisetshenziselwa ukuvusa umuntu noma ukusho ukuthi weneliswa ngomunye osohlangothini lwakhe. I-Fist Emoji ingenye edume kakhulu, esetshenziswa ngokunembile njengesenzo esifanayo esidumile sobungani empilweni yangempela, okungukuthi, ukubingelela umngane esikhundleni sokuthi "sawubona". Ngakolunye uhlangothi, kungabuye kuhunyushwe njengosongo lwe-rennet.
Ngikubhekile! Lawa mehlo amabili asho ukuthi kukhona okubonwayo noma okuqinisekiswayo.
Isetshenziswa uma uzwa noma ubona othile enza into ewubuwula, kodwa ingasetshenziswa futhi uma uzizwa "unamahloni ngabanye."
I-Peach Emojis isetshenziswe kabanzi ukumelela izinqe, ngenxa yokufana okubonwa ngabasebenzisi abaningi. Lokhu kuholele ekutheni aziwe ngele-"butt emoticon".
Inyanga egcwele i-euphemism yasekuqaleni esetshenziselwa isinqe. Eqinisweni, e-US, inyanga ibisetshenziswa ukuchaza izimbongolo kusukela ngo-XNUMX, kudala ngaphambi kokuba kusungulwe i-Peach Emoji.
I-Emoji Yenyanga Emnyama ivamise ukusetshenziselwa ukugqamisa incazelo yocansi emshweni. Ukudlala ngothando kuvame ukusetshenziselwa ukwenza ihlaya locansi.
Le Emoji ye-Smiling Poop isetshenziswa kuzimo eziningi. Ukusetshenziswa okuvamile kwalokhu ukuthi okuqukethwe kubi, kodwa kungase futhi kusetshenziselwe ukuveza ulaka lokwenziwa, ngenxa yobuso obujabule, obumamathekayo bale nqwaba yendle.
I-Emoji yesitshalo seqanda yayivame ukusetshenziswa emilayezweni eku-inthanethi ukuze imele izitho zangasese zabesilisa noma njengezinkulumo zocansi.
Abantu abaningi babheka le Emoji njengokumelela umuntu ohonqayo ngokucasuka. Kodwa eqinisweni, la mafu amhlophe aphuma ekhaleni afuna ukumelela ukudelelwa, uphawu lokuziphakamisa. Kubonisa umuntu ozidlayo, onqoba omunye.
Kopisha bese unamathisela ama-Emojis
Izinhliziyo Ezimnyama Emojis